GTranslate: Nuqul Tarjumaad WordPress ah oo Isticmaalaya Google Translate | Martech Zone
Isniin, November 2, 2020 Khamiis, Maarso 18, 2021 Douglas Karr
Waagii hore, waan ka labalabeynayay isticmaalka a turjumaadda mashiinka of my site. Waxaan jeclaan lahaa in turjumaanno adduunka oo dhan ay iga caawiyaan turjumidda degelkeyga dhagaystayaal kala duwan, laakiin ma jirto si fudud oo aan uga soo kaban karo kharashyadaas.
Taasi waxay tidhi, Waxaan ogaanayaa in waxyaabaha ku saabsan boggeygu ay si caalami ah u wadaagaan wax yar - dad badana ay isticmaalayaan Google turjumi inay ku akhriyaan nuxurkayga afkooda hooyo. Taasi waxay iga dhigeysaa rajo wanaagsan in tarjumaaddu ay fiicnaan karto hadda maadaama Google uu sii wado hagaajinta adeegsiga barashada mashiinka iyo caqliga macmalka ah.
Aniga oo taas maanka ku haya, waxaan doonayay inaan ku daro plugin soo bandhigtay turjumaad iyadoo la adeegsanayo Google Translate, laakiin waxaan doonayay wax ka ballaadhan ka hoos u dhaca oo turjumay bogga. Waxaan rabaa matoorada raadinta inay si dhab ah u arkaan una muujiyaan nuxurkeyga caalami ahaan oo u baahan dhowr astaamo:
Metadata - markay matoorrada raadinta gurguuranayaan boggeyga, waan doonayaa hreflang ku calaamadee cinwaankayga si ay u siiso mashiinnada raadinta marinnada kala duwan ee URL ee loogu talagalay luqad kasta.
URL - gudaha WordPress, waxaan rabaa in isweydaarsiga lagu daro luuqadda tarjumaadda dariiqa.
Rajadaydu, dabcan, taasi waa inay furi doonto boggeyga dad aad u balaaran waxaana jira soo laabasho wanaagsan oo maalgashi maadaama aan kordhin karo xiriirkayga iyo xayeysiinta - anigoon ubaahneyn dadaalka tarjumaada gacanta.
GTranslate Plugin WordPress
Qalabka loo yaqaan 'GTranslate plugin' iyo adeegga la socda waxay ku darayaan dhammaan astaamahan iyo sidoo kale dhowr ikhtiyaar oo kale:
Dashboard - Khariidad adeeg oo dhammaystiran oo loogu talagalay qaabeynta iyo ka warbixinta.
Tarjumaadda Mashiinka - Tarjumaadda degdegga ah ee Google iyo Bing.
Tusmeynta Mashiinka Raadinta - Mashiinnada wax lagu raadiyo ayaa tilmaamaya boggaga aad tarjumtay. Dadku waxay awoodi doonaan inay helaan badeecad aad iibiso iyagoo ku raadinaya afkooda hooyo.
Raadi URL-yada saaxiibtinimada leh - Hayso URL gaar ah ama Subdomain luuqad kasta. Tusaale ahaan: https://fr.martech.zone/.
Tarjumaadda URL - URL-yada websaydhkaaga waa la turjumi karaa taas oo aad muhiim ugu ah SEO-ga ku hadla luqadaha badan. Waxaad awoodi doontaa inaad wax ka beddesho URL-yada la turjumay. Waxaad u adeegsan kartaa barxadda GTranslate si aad u aqoonsato URL la turjumay.
Tafatirka Tarjumaadda - Tafatir tarjumaadaha gacanta tooska ah ee tifaftiraha GTranslate si toos ah uga soo qaad macnaha guud. Tani waxay lagama maarmaan u tahay waxyaabaha qaarkood… tusaale ahaan, ma doonayo magacayga shirkadayda, Highbridge, tarjumay.
Tilmaamaha khadka - Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa qaabeynta qoraalkaaga si aad u beddesho xiriiriyeyaasha ama sawirrada ku saleysan luqadda.
Qaamuusku wuxuu lamid yahay sawirka:
Hadana haddii aadan rabin qayb la tarjumay, waxaad ku dari kartaa uun fasal ka mid ah tarjum.
Istaatistikada Isticmaalka - Waxaad ka arki kartaa taraafikadaada tarjumaadda iyo lambarka tarjumaadahaaga dashboardka.
Subdomains - Waxaad dooran kartaa inaad yeelato subdomain mid kastoo ka mid ah luqadahaaga. Waxaan doortay wadadan halkii aan ka dooran lahaa dariiqa URL-ka maxaa yeelay way ka yareyd canshuurta webserver-kayga. Habka subdomain waa mid si dhakhso leh u dhaqso badan wuxuuna si toos ah farta ugu fiiqaa Gtranslate's keydkiisa, bogga la tarjumay.
Domain - Waxaad luqad kasta ku yeelan kartaa cinwaan u gooni ah. Tusaale ahaan, haddii loo isticmaalo a .fr domain heer sare ah (TLD), boggaaga ayaa laga yaabaa inuu ka sarreeyo darajooyinka natiijooyinka mashiinnada raadinta ee Faransiiska.
Wada shaqeynta - Haddii aad jeclaan lahayd shakhsiyaadka inay gacan ka geystaan ​​tarjumaadda gacanta, waxay heli karaan marinnada 'GTranslate' waxayna ku dari karaan wax ka beddelka buugan.
Tafatir Taariikh - Arag oo wax ka beddel taariikhdaada wax ka beddelka gacanta.
Updates aan xuduud lahayn - Looma baahna inaad iska hubiso cusbooneysiinta softiweerka oo aad rakibto. Waxaan ka taxaddarnaa wixii ku soo kordha. Kaliya waad ku raaxeysaneysaa adeegga ugu dambeeyay maalin kasta
Languages - Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese (La fududeeyey), Chinese (Dhaqameed), Corsican, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English , Esperanto, Estoniyan, Filibiin, Finnish, Faransiis, Frisian, Galician, Joorjiya, Jarmal, Giriig, Gujarati, Haitian, Hausa, Hawaii, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese , Kannada, Kazakh, Khmer, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malayalam, Malay, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Pashto, Beershi, Boolish, Boortaqiis, Punjabi, Romaaniyan, Ruush, Serbian, Shona, Sesotho, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Samoan, Scots Gaelic, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish , Yukreeniyaan, Urdu, Uzbek, Fiitnaam, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu
Saxeex u noqo Tijaabada GT-ga 15-Maalmood
GTranslate iyo Falanqaynta
Haddii aad u isticmaaleyso dariiqa URL ee loogu talagalay GTranslate, ma geli doontid wax dhibaato ah oo ku saabsan raadinta taraafikadaada la tarjumay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka shaqeyneyso subdomains, waxaad u baahan doontaa inaad si sax ah u qaabeyso Google Analytics (iyo Google Tag Manager haddii aad isticmaaleyso) si aad u qabato taraafikadaas. Waxaa jira a maqaal weyn oo faahfaahinaya dejintan marka anigu ku celin maayo halkan.
Gudaha Google Analytics, haddii aad rabto inaad u kala soocdo falanqayntaada luqad, waad awoodaa ku dar magaca martida cabbir labaad si aad ugu shaandheyso taraafikadaada subdomain.
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay GTranslate.
Tags: tarjumigoogle translatehreflangturjumaadda mashiinkatarjumaadaWordPressplugin WordPresstarjumaadda wordpresswordpress plugin turjumaad
Qaaciddada 'Excel' ee Jadwalka Cusboonaysiinta Bulsho ee Maalinta Usbuuca